धुलिखेलमा सुनकोशीको चिन्ता: दोलालघाटका माझी बस्ती संकटमा, जनप्रतिनिधि ‘सिंह’ ! (भिडियो सहित) « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
धुलिखेलमा सुनकोशीको चिन्ता: दोलालघाटका माझी बस्ती संकटमा, जनप्रतिनिधि ‘सिंह’ ! (भिडियो सहित)
धुलिखेल, १३ पुसः जिल्लाका सरोकारवालाहरुले सुनकोशी नदीको दोहन भइरहेको भन्दै जोगाउन आग्रह गरेका छन् । आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले धुलिखेलमा आयोजना गरेको विकास निर्माणमा नागरिक समाज र सञ्चार जगतको भूमिका विषय छलफल कार्यक्रममा सहभागि भएका पत्रकाहरुले विकासको नमूना हेर्न सुनकोशी बगरमा जान जिल्लाका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकषर्ण गराए ।
कर बढी संकलन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरुले मनलाग्दो तबरले नदीमा ठेक्का लगाएको र ठेक्केदारले ज्यादती पूर्ण तरिकारले बालुवा उत्खनन गरेको भूम्लुका क्रान्ति दोङले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहकै आडमा ठेकेदारले बस्ती नै सखाब पार्न लागेका छन् । बालुवा उत्खननले दोलालघाट स्थित सुनकोशी नदी किनार आसपास रहेका माझी समुदायका बस्ती संकटमा परेका छन । नदीमा दैनिक डोजर चल्छ ।
अनुगमनका लागि धुलिखेलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, प्रहरी लगायतका टोली बेला बेला नदी किनारमा पुग्छन । उनीहरु नपुग्दै बालुवा उत्खननमा सक्रिय माफियाहरुले डोजर अन्यत्रै लुकाउँछन । अनुगमन टोली देखे नदेखे जस्तै गरी फर्कन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मञ्जु गौतमले अनुगमनमा जाँदा नदीको अवस्था देखेरले दया लागेको बताइन । ‘गर्न नहुने काम समेत नदीमा भएको छ, उनले भनिन ‘कर संकलनको नाममा प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको दोहन कसरी सहने ?
सुनकोशी नदीमा धेरै जसो ठेक्का जनप्रतिनिधिकै भाइभतिजा र आफन्तले पाएका छन । बाँकी राजनीतिक आडमा ठेक्का लिएर नदीलाई छियाछिया पारिरहेका छन । जनप्रतिनिधि आफै ‘सिंह हुँ’ भने झै गर्छन । प्रहरी पैसामा बिग्छ । सोझा माझी समुदायका बोलिदिने कोहि छैनन ।
बालुवा उत्खनन पछि माछा मार्ने माझी समुदायको पेसा नै लोप भएको छ । नदीको बहानै परिवर्तन हुने गरी बालुवा उत्खनन भएपछि नदीमा माछा पनि पाइन छाडेको छ । क्रसर उद्योगबाट निस्केको धमिलो पानीका कारण पशुचौपाय समेत जोखिममा परेको स्थानीयको भनाई छ । सुनकोशी नदी काभ्रेको भूम्लु, पाँचखाल, तेमाल र चौरीदेउराली गाउँपालिका छुदै बग्छ । त्यहाँ स्थानीय सरकारको रामराज्य छ । ठेकेदार मोटाइरहेका छन । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको धज्जी उडाएर बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयको अनुमति समेत नदिएको पाइएको छ ।